အမိမြေသို့ကျေးဇူးဆပ်ခြင်း: January 2008
ဗျိုင်းနားလို့ ၊ ကိုင်း တဲ့ပေါက်ပင်…
ငါးပေါ်လို့၊ နားတဲ့ ဗျိုင်း ဖြူစင်။
မိုးရွာလို့ သာပေါ်လာ၊ ငါးကြင်းလှရွှေဝါ။
ဖားငယ် အော်လို့ သာ။ မိုးဝဿာန်ဦး ရွာ
မြွေဆိုး လာကိုက်။ ဖားအော်ခိုက်။
အကြောင်းရှိမှ၊ အကျိုး ဖြစ်ရ
ကန်စောင်းမှ ပေါက်ပင်ကိုင်းရခြင်း အကြောင်းရင်း။
ဖွေရှာထောက်ရှု. ဘာတွေပြုဖို့ လိုကြမလည်း။
အဖြေရှာရှင်းမှု.. ဘယ်သူမှာ တာဝန်ရှိသလည်း။
ရေမကြီးစေ လိုက။ ဖားမအော် စေနှင့်
ဖားမအော်စေ လိုက။ မြွေ လာမကိုက်စေနှင့်
ရေစိမ့်မပေါက်၊ ဆည် မပျောက်ပြီ။
တညနေကြာ။ ဆည်လုံး ပါမည်.
ဆုံးရှုံး ချည်းနှီး။ ပြုန်းတီး သည်ကို.
ပြင်ချင် ခဏ။ ကြိုးစားကြလေ..
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂၉။၂၀၀၈)
ပေါက်ပင်..ကိုင်းရခြင်း အကြောင်း ၏ အိုင်ဒီယာ ပိုင်ရှင်မှာ မောင်လေး ကိုမျိုး ဖြစ်၍ ခလေးဘ၀ ညစာဘဲ စား၍ စာမကြည့် သောကြောင့် ကဗျာစာသားမေ့နေသောမသဒ္ဓါ အား မှတ်မိအောင် ကဗျာ ထောက်ပေးသူမှာ..မောင်လေး ကိုယောဟန်အောင် ဖြစ်ပါသည်။ ကြားမှ အညွန့့် ခူးစား၍ နှစ်ပြည့်မင်္ဂလာကို မောင်လေးများ အစွမ်းဖြင့်" ပေါက်ပင်..ကိုင်းရခြင်း အကြောင်း " ကဗျာဖြင့် ပုဒ် (၂၀၀) မြောက် ကဗျာဖြင့် ပွဲသိမ်းသူက အပေါက်ဆိုးသော ဖျံကျသော အမကြီး မသဒ္ဓါ ဖြစ်ပါသည်။ အားလုံးကို ကျေးဇူး အထူးပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:23 AM0comments
ပြုစု ပျိုးစေ၊ ပင်ထွားစေ။
အပွင့်လှစေ။ ရနံ့ ဝေမည်။
ငွေအဆမတန် ကျောင်းမှကောက်ယူမှု ကြောင့် ကျောင်းဆက်မတက်နိုင်ဘဲ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ကျောခိုင်း ထွက်သွားရသောခလေးများ အကြောင်း http://burmese.dvb.no/news.php?id=3630 ကို ကိုးကားပါသည်။ စစ်အစိုးရ လက်ထက် ပညာငတ်သော ခလေးများ အား ရင်နှင့်အမျှ စာနာမှူဖြင့်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:20 AM0comments
ရွှေမင်းသားနဲ့ လူရွှင်တော်..ပြည်သူ့ အချစ်တော်
အိမ်မက်တောင် မက်ဘူးတဲ့ အထိ။
မထိတထိအပြုံးကြောင့် ရင်ခုန်ဒိတ်ဒိတ် ဒီကလူ
ရုပ်မြင်သံကြားမှာ အငြိမ့် က
အရီရဆုံး ဆိုတဲ့ ကိုဇာကနာ.။
မှန်တာ ပျက်လုံး ထုတ်တဲ့ နေရာ
အခေါက်ခေါက်အခါခါ အ၀င်နဲ့ အထွက်။
မတွန့် စေ၊ မရွံ့ စေ။
ကြောက်မွေးတွေ ဇာဂနာနဲ့နှုတ်
တရားဥပဒေ ဆိုတာ စောင်အုပ် သိမ်းမရ။
မစစ်မှန်တဲ့ စစ်အစိုးရ။ တနေ့ ဒို့ ခ၀ါချကြမယ်။
ဆွမ်းလောင်းပွဲ သွားတာတဲ့ ဒီ အပြစ်
ညစ် နေတာက လူယုတ်မာများ။
ဥပုဉ် မစောင့်စေချင်၊ ကဲ..ထောင်ထဲဝင်..
ကြွက်တွေ နဲ့ နေ၊ ၀ဲတွေက ပေါက်။
အဓမ္မတရားနဲ့ချိုးနှိမ်ထားလည်း။
မင်းတို့ ရဲ့ ဂုဏ်ရည်..
အားမလျှော့နဲ့ဆက်လျှောက်ကာချီ
အရှေ့ မှာ ရောင်နီ တွေကျင်းနေပြီ။
ချိုးဌက်တွေ လည်း စိုးစီစီ..
လာလေ.. အားလုံးရှေ့ ဆက်လျှောက်ကြမည်။
ခင်မင် လေးစားရပါသော ကိုကျော်သူ နှင့် ကိုသူရ တို့ အတွက်..မသဒ္ဓါ ရဲ့ လက်ခုပ်အားပေးသံ လေး တချက်ပါ။ အရေးတော်ပုံ အောင်မှာပါ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:09 AM0comments
ညပိန်း မှောင်မဲ.လရောင် နည်းပါး
မိုးသည်း ရွာချ။ လျှပ်ပြက်စတွေ
လေထန် ပြူတင်း။ ခန်းစီး ကခုန်
စိုရွဲ မိုးရေ။ ငိုနေ မျက်ဝန်း။
ညှိုးငယ် လွန်းနေ။ သမီးလေးရေ။
မိုးတွေ မှောင်မဲ။ ကြောက်ဘဲ နေမလား.
ချမ်းစိမ့် အေးမှောင်။ သံချိုင့်လှောင်ထဲ
သစ္စာ ရှိခြင်း ။
တရား သဖြင့်၊ တော်လှန်ခြင်း။
သတ္တိ ရှိတဲ့ တော်လှန်ရေးသားကောင်းတွေ။
ဒီလို ပေါ်တွန်းစေဖို့ 
ကျွေးမွေး သုတ်သင်တဲ့ အမေလို
ခိုင်သောနှလုံးသားနဲ့ သမီးလေး ယုံ။
စိတ် သံမဏ္ဍိ။ ခိုင်မြဲ အတိ။
အသက် (၁၆) ငယ်ပျိုမျစ်လည်း.
ခွပ်ဒေါင်း ပီပီ။ ရဲသွေးနီသည်။
မသေ မချင်း။ ခွပ်လိုက်မဲ့ အိုးဝေ။
မတရားတာဆို။ လက်ပိုက် မကြည့်
ရဲရင့် ကာကွယ်။ ကျောင်းသူငယ်တို့ 
၂၀၀ရ က. စက်တင်ဘာလ.
မေ့ အိမ်ပြန်လမ်း.။ ပမ်းလျှ အိုမြစ်
စိုညစ် သွေးစွန်း။မျက်ဝန်း မျက်ရည်။
တောက်ခေါက် အံကျိတ် ။ ဒေါမာန် စိတ်သည်။
“သေသည်တိုင်တောင်..ကျမ မကြေ၊ အမေ”
ဆီမီး ပူဇော်၊ ကိုးကော်ရော်သည်.
ပျံလွန် သံဃာ။ ကျဆုံး ရဲဘက်။
မိုးကြိုးသွား လို၊ အော်ဟစ် ငေါက်ငမ်း ။
“ ဟေ့ ဟေ့ တံခါးဖွင့်ကြစမ်း”..
ဆတ်ကနဲ သူ ထ.
မီးစ မျက်ဝန်း။ စေ့ထား နှုတ်လွှာ။
(၁၆) နှစ် သမီး။ ခေတ်ပျက် မှာကြီး
ဆန္ဒပြလို့ တဲ့ ထောင်ချ။
တော်လှန်ရေးအတွက် သူ စတေးခဲ့ပြီ။
အမေသက်တမ်းရောက် မသဒ္ဓါ၏ သွေးမငယ်သော သူငယ်ချင်းမများနှင့် အာဇာနည် သမီးများအတွက်
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 2:24 AM0comments
ကျေးဇူးတင်ပါသည်. တနှစ်မြောက်မွေးနေ့မင်္ဂလာမှ သည်။
မသဒ္ဓါ၏ ကဗျာများ စာမျက်နှာသည် (၂၀၀ရ) ဇန္န၀ါရီ လ (၃၀) နေ့ မှစတင်ရေးသော ကြောင့် (၂၀၀၈) ဇန္န၀ါရီ လ (၃၀) နေ့ တွင် တနှစ် တင်းတင်း ပြည့်ပါပြီ။
စတင်ရေးခါစ တွင် ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးသော သင်ဆရာ မြင်ဆရာ. တက်စလာ။ ကိုမိုးတိမ်။ ကိုရန်အောင်။ ကိုလှ၊ ကိုညီလင်းဆက်၊ ကိုဝေယံလင်း။ ကိုဘုရင့်နောင်။ ကိုဈန်။ ကိုမင်းမင်း။ အရှင်မေတ္တာစာရ နှင့် အခြား သူ များထံ မှ ဖတ်ရှု လေ့ လာခဲ့ရသော ကြောင့် အထူး ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။
posts ပေါင်း (၂၀၀) ပြည့်စေရန် နှစ်ပတ်လည်တွင် ရေးသားခဲ့မည် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် အလုပ်ကိစ္စ များကြောင့် ၂၀၀၈ တွင် အရင်နှစ်ကဲ့သို မရေးနိုင်ပါက နားလည် ခွင့်လွှတ်ပေးစေလိုပါသည်။ အားပေးသူ များ အကို အမများ နှင့် မောင်နှမငယ်များ အားလုံးရွှင်လန်းကြပါစေ။
မသဒ္ဓါ (၁။ ၂၇။ ၂၀၀၈)
အကယ်၍ ဘလော့ရေးခြင်း ပတ်သက်၍ အရေးပေါ် အကူအညီ တောင်းလိုပါက email တွင်လည်းကောင်း cbox တွင်လည်းကောင်း ရေးထားခဲ့ပါ၊ ကျမပြန် ဆက်သွယ်ပါမည်။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:22 AM2comments
သင့် ကိုတိုင်းပြည်အတွက် အလိုရှိသည်။
အရှေ့ တောင်အာရှ တစောင်း
Made in Burma ဆေးမှကောင်းသတဲ့
အကျောအချင်တက်ရာ..ကုတိုးနှာ နဲ့ နှာချေပါ
ရှုရှု မပေါက်. သံမနိုင် ကျောက်မနိုင် ကျိုသောက်။
ဌက်ဖျားရောဂါ. ပိုးမွှားများ ဆေးပြီးလာ
AIDS မဆုံးနိုင်မဲ့ ရောဂါသံသရာ။
ကမ္ဘာ့ အမြင့်ဆုံး စာရင်းဝင်
အဆိုးဆုံး စာရင်းဝင်တဲ့ နိုင်ငံ
ဘုရား ဘုရား လက်ကားယား
ဘယ်သူမှ လာမတိုက်တဲ့ သူ့ တိုင်းပြည်အတွက်
စစ်စရိတ် ဘတ်ဂျက် ၄၀%
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ၀.၁ %
ပညာရေး ၁.၃ %
ခလေးများရဲ့ ၄၀% သာ အလယ်တန်းကျောင်းရောက်
ကျန်တဲ့ ၆၀% ဘယ်ပျောက်သွားပါသလည်း.
သက်တမ်း (၇၀)ကျော် ရှည်လျှား
မြန်မာ့သက်တမ်း (၆၀.၂၉) နှစ်ဘဲရှိ။
ဒီလိုသာ ဆုတ်ကပ် နဲ့ သွားကြည့်
ပေါများလာမဲ့ Night club.
ရွှေမရှိတဲ့ ရွှေတိဂုံ။ ထုံးသင်္ကန်းဘဲရုံတော့။
ဖမ်းမှာ ကြောက်လို့ ဘုန်းကြီးဝတ်မဲ့လူမရှိ
တရားဓမ္မ သွန်သင် ပေးမဲ့ လူမရှိ.
အမှန်ကိုသိ..အားလုံး စေတနာရှိဖို့ လိ်ုပါသည်။
သင် နေသည့် အိမ်အို ။
ကျွန်ုပ်တို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ကိုယ်စီ
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂၇။၂၀၀၈)
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 8:13 AM0comments
ဥရုဝေလတော ရဲ့ လင်းလွန်းပင်အောက်မှာ
(၁) မြတ်ဘုရားရှင် ဦးစွာဖူးခဲ့ရ။
(၂) ဆွမ်းဦး ပျားရည်ချိုမုန့်ဆက်ကပ်ရ။
(၃) မြတ်တရားဦး နာခဲ့ရ။
(၄) ဗုဒ္ဓဘာသာဦးစွာ ဖြစ်ခဲ့ရ။
(၅) သရဏဂုံဦး ဆောက်တည်ခဲ့ရ။
(၆) ဗုဒ္ဓရှင်တော်ပွင့်တော်မူကြောင်း သတင်းဦးပေးခွင့်ရ။
(၇) သက်ထင်ရှား မြတ်ဘုရား၏ ဆံတော်မွေနှစ် ဆုဦးရရှိခဲ့ရ။
(ဂ) ပထမဆုံးသောစေတီဦး (ရွှေတိဂုံ) တည်ဖူးခဲ့ရ။
(၉) ဗုဒ္ဓ နှင့် ဓမ္မ ( ၂) ပါးသော သရဏဂုံ၊ အဦးဆုံးတည်ခဲ့ရာ။ ဗမာ
ဗုဒ္ဓရတနာ ၏ အဦး ကိုးဖြာ..
ရရှိခဲ့ တာ မြန်မာ။
ဒီလို အဦးရတဲ့ ဗမာ..
ဂုဏ်ယူစွာ.. ဗုဒ္ဓ သာသနာ
သူတော်စင်အပေါင်း တို့ 
သာသနာတော် နှစ်တသောင်းတည်မြဲစေကြောင်းသို့ ။
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 9:09 AM0comments
တပ်မတော်ကြီး အင်အားရှိစေရာ ဟုမပါရှိ
ကိုယ်မဲ ကိုယ်ချ ဥပဒေ
နိူင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ တဲ့
စစ်ရေး အတွေ့အကြုံရှိသူကိုသာ ရွေးချယ်ရာ။
အမတ်နေရာ..စစ်သား ၂၅% ပါဝင်ရေး.
စားစရာမှန်သမျှ ကိုယ်အိပ်ထဲ က်ိုယ်ဖိတ်
နောက်လူစား ဖို့ တောင်မရှိ.
မြန်မာ ပြိုင်ဖက်မရှိ ဗိုလ်စွဲ..
စစ်တပ် ဆွဲဖြဲသွားလို့ 
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 7:58 AM0comments
အသံမမြည်တဲ့ ကိုယ်ပေါ်က ချိန်ကိုက်ဗုံး
ခုခံအားကျဆင်းမှုရောဂါ (သို့ မဟုတ်) AIDS
မခံနိုင် ဆန္ဒပြ ထောင်ချ။
ရေပေါ်ဆီ လူ့ မလိုင်များ နဲ့ 
နှစ်တန်း နှစ်စား ဘဲကျန်တယ်။
ယောက်ျား မွဲရင် စစ်ထဲဝင်။
မိန်းမ မွဲ က XXX ဖြစ်ကြ။
၀မ်း တွေက ဆာ
အာရှ တစ်ခွင် မှာ
ရိုးသား တည်ကြည်တဲ့ ဗမာမိန်းမ
ရှက်ကြောက် ဖြူစင်တဲ့ ဗမာမိန်းမ
နအဖ ကြောင့် XXX ဖြစ်ဖူးပြီ။
တပ်မတော်အောက်မှာ ပဲ့ရွဲ့ နေပြီ။
စစ်သား ၅သိန်းလည်း သိပ်မကြာ
ရောဂါသည်ပေါင်း ( ၃) သန်း (၆) သောင်း
စစ်တပ်ထဲမှာတင် လူ (၁) သောင်း
အာရှရဲ့ ကူးစက်မဲ့ ရောဂါ လေပူပေါင်း
ဗမာပြည် လူသူမရှိ ဟောင်းလောင်း
ထပ်မမိုက်ကြပါနဲ့ တော့ နအဖ။
ပြည်သူဆီ တိုင်းပြည် ပြန်အပ်ကြပါတော့။
တိုင်းပြည်ဟာ ချောက်ကမ်းပါးဝ မှာမဟုတ်
မူတူတူ ခေါင်းခါ မနေပါနဲ့ တော့
ပြည်သူကို ကယ်တင်လှဲ့ ပါတော့
Posted by Ma Thadar ( မသဒ္ဓါ ) at 5:23 AM0comments
မုန့် ဟင်းခါး အကြော်ပါ ၁၅ ပြား။
ကျောက်ကျော။ သံပုရာ ရည် ၁၀ ပြား
ဗိုက် ကြီး လည်း ဖောင်းကား
ဖွံ့ ဖြိုးရေး။ အချုပ်အလုပ်
ကြံ့ခိုင်ရေး နဲ့ ပီတီ။
သိပ္ပံ ပညာ လေ့လာရေး
လက်တွေ့ ခန်း နဲ့ ဓါတ်ခွဲခန်း
၉ တန်း မှာ ဖား စခွဲ
မသဒ္ဓါ ကြောက်ရွံ့ မရဲတရဲ
ဖားကလေးက နှလုံးလေး ခုန်နေဆဲ။
ကျောင်း အသင်းများ ပြိုင်ဆိုင်ကြ
၀န်ကြီးသမီး စာမကျက်က၊ စာမေးပွဲကျ၏
တရားမျှတ တဲ့ ဆရာသမား
မျောက်ရှုံးဆော့ တဲ့ မသဒ္ဓါ
လက်ဖ၀ါးမှာ ခုထိ အရှိုးရာရှိ
တော်ရင် ချီးမွန်း။ မတော်ရင်နှိပ်ကွပ်
ပုဝါကလေး ချ။ ကြံ့ဖွတ်ထဲ ချီတက်ပြ။
လက်ချည်း ပလာ.အိမ်မလာနဲ့ 
ပါတိတ်မပါ။ မျက်နှာမသာယာနဲ့ 
ဒီခေတ် ဆရာမတို့ ဂုဏ်
ရွှေငွေသာမပါ. တော်တဲ့ခလေး ဘိတ်ချေးမှာ
အင်္ကျီ င်္ခပ် နွမ်းနွမ်း.။ ပူပုံပန်း
ချစ်တပည့်ရဲ့ မျက်နှာက်ို တစမ်းစမ်း
တုန်တုန်ယင်ယင် သာဓုခေါ်ခဲ့ 
" ဘုန်းကြီးပါစေ။ သက်ရှည်ပါစေ၊
ဘေးမသီရန်မခ. ရေထိပန်းလို လန်းဆန်းပါစေ။"
ရှိသမျှ ရသမျှ ဆု တွေကို ဆို
သူ့ ဥယျာဉ် ကပွင့်တဲ့ လန်းဆန်းတဲ့ ပန်းကို
ရွှင်ပီတိ် မျက်နှာ အိုအို..
မသဒ္ဓါ မျက်ရည်တို့ လည်းပြို။
မသဒ္ဓါ (၁။၂၅။၂၀၀၈) လက်ဦးဆရာမများသို့ဂါရ၀တရားများစွာဖြင့်
ပုစဉ်းရင်ကွဲလေးတွေ.. အော်နေဆဲ ပါမောင်။
ပုစဉ်းရင်ကွဲ တွေ အော်မြည်ကြ
တမ်းတ သလော..ဆာ၏ လော။
ပုစဉ်းရင်ကွဲတွေ.. အော်တဲ့ ည..
ကျမ ၀မ်းကြာတိုက်က သူ့ ခလေး
အသက် ၁၉ နှစ် ပြည့် အထိ
အိမ်ပြန် သူ မရောက်ရှိခဲ့သူ.
ကျမရဲ့ ဘ၀ ရင်မီးဆူ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:41 PM0comments
၂၀၀၇ အမျိုးသားနေ့ မှာနောက်ဆုံးတွေ့ ခဲ့ရ
နေ ကလည်း ညို
လေးစားရပါသော..ဆရာကြီးဦးတင်မိုး သို့ .
ဒီကဗျာကို ဆရာကြီး ဆုံးတဲ့ အချိန် လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ရေးခဲ့တာပါ။ ဆရာကြီး အမှတ်တရ ကျန်ရစ်သူ မိသားစု ထံ ပ်ို့ ပေးခဲ့ပါတယ်။ ရှေးဟောင်းနှောင်းဖြစ်အနေနဲ့ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:07 PM0comments
ဖွံ့ ဖြိုးသာယာ၊ ပွင့်ဝေဆာ
ခွါညို ဇလတ်၊ ရင်ကတ် သရဖီ
အင်ကြင်း ကံ့ကော်၊ ခတ္တာသော်က၊
တင့်အားဝေစီ။ ပန်း၏ ပန်းချီ
နေ့ သစ်ဆီ မျှော်ရည်ဦး
ပန်းစိုက်ပါလှဲ့ဥယျာဉ်မှူး။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂၄။၂၀၀၈)
အသက် (၅ )နှစ်မပြည့်မီ သေဆုံးကြွေကျ သော ပန်းနွမ်း ကလေးများ..လန်းဆတ်တင့်တယ် စေရန် မြန်မာ ပြည်သူပြည်သား တိုင်းတွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ ၀ိုင်းဝန်း စောင့်ရှောက်ပေးကြပါ။ မေတ္တာရပ်ခံပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:16 AM0comments
ကဲ…မီဒီယာ နဲ့ တိုက်ချင်သေးလား.
ရသ ဆရာ ရဲ့ ကွန့် စာခွေ
ချစ်သူတို့ အတွက် ရင်ခုန်စရာ
ဗာလင်တိုင်း ရဲ့ ကဗျာ
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:28 AM0comments
အမှန်တရား အတွက်လူကြီးမင်းရဲ့ လက်မှတ်ကလေး မစပါ။
ဒီနေရာမှာ အသနားခံစာလေး ရှိပါတယ်. သင့် စေတနာလုပ်ရပ်ဖြင့် အပြစ်မရှိသူတွေကို နှမ်းကလေးတစ်လုံး လက်မှတ်ကလေးတစ်ခု နဲ့ ကယ်ဆယ်ပေးဖို့ သင် ၀န်မလေးရင်.mouse ကလေးသာ Click လုပ်ပေးပါ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:48 PM0comments
First lady (သို့ မဟုတ်) အဂ္ဂမဟေသီ မှန်ခဲ့ ရင်
လူမျိုးနဲ့ နိုင်ငံရဲ့ စံပြ
အမိများတို့ ရဲ့ ဂုဏ်
လျှမ်းလျှမ်းတောက် တဲ့ စင်္ကြာဒေ၀ီ။.
မှုန်နံ့ သာဘဲ ချယ်သ
တီဗွီထဲ အလှ လာလာပြ။
ခုခေတ်က ရွှေကတော်ကြီး
လက်ဖက်ရည်ဆိုင်။ စားပွဲထိုး ဘ၀ရောက်.
သင့်မြေးတယောက် ကောင်းစားဖို့ ဘဲကြည့်
သန်း ၅၀ ကမွေးတဲ့ ခလေးတွေက စားစရာနတ္တိ
မသိဘူး လာမပြောနဲ့ ။
တွေ့ ကရာမိန်းမတွေနဲ့ အိပ်
စာနာမှုလေး ထားလှဲ့ ပါဦး။
ဒီလို အညှင်းခံ မိန်းမများ
သူ့ လင်မကောင်းတာ ငါ့အရေးမဟုတ်
အမည်ရရုံဖွဲ့မိခင်နဲ့ ခလေးအသင်း
တခါလာ ဖဲပြားဖြတ်။ အလှုငွေဘဲ တောင်းလက်ဖြန့် 
မဲပြာပုဆိုးနဲ့အလှူငွေ.
ဒါ မိန်းမမြတ် မဟုတ်ဘူး။
သင် ဟာ နန်းမတော် မဟုတ်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:27 AM0comments
ဖန်မီးအိမ်မှသည် မီးညှိခဲ့ပြီ။ ဆီမီးခွက်ဆီသို့ 
နှစ် ၁၀၀ ကြာသော်ညား
သူကဗျာနဲ့ကိုယ်ပျော်ဖူးတယ်။
သူ့ ကဗျာနဲ့ကိုယ်ရဲရင့်ဘူးတယ်။
သူ့ ဝိညာဉ် နဲ့လမ်းဆက်လျှောက်ဦးမယ်။
ဆရာဂျမ်း အတွက် အမှတ်တရ..အညတြ မသဒ္ဓါမှ..ပူဇော်ပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:21 AM0comments
တကိုယ်လုံးမပုပ်ခင်. ပုပ်တဲ့ လက်ချောင်းကိုဖြတ်
ရာသီနဲ့ လိုက်၊ သီးမစိုက်။
ငါမှ ငါပင်။ ဘက်မမြင်
ကပ်နေတဲ့ မုံ့ လုံးနဲ့ စက္ကူ။
ကြောင်ဘားက မြီးဖျား လိုက်
သေသည်ဦးမညွတ်. ဥဒေါင်းတို့ အသက်ဘဲစွန့် 
ဘယ်တော့မှ နောက်မတွန့် ။
ဘယ်သူ ငြင်းရဲ သလည်း။
သမာသမတ်မျှတ ကြဖို့ 
ကုတ်နဲ့ ကော် ကန်ချရမလား။
မိုက်ညစ်ညစ် ပြောဆင်းတဲ့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ဆိုးချက်
အခု မောင်ပုလဲက ဒိုင်းဝန်ထက်ကဲ။
သုမန ကျောက ဒဏ်ရာတွေ သွေးချင်းချင်းနီ
ရသမျှ လက်နက်နဲ့ တော်လှန်ကြဖို့အချိန်ကျခဲ့ပြီ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:42 AM0comments
ရွှေငွေ အထည်ဆိုင် ပိုက်ဆံမပေး၊ လုယက်ကြ။
အလည် အခစားဝင်တဲ့ ၀န်ကတော်များ
ကြီးဒေါ်ကြီး ရဲ့ လောဘမီးစက်။
၀န်ကတော်တွေကြား၊ လက်တို့ ပြီးကဲ့ရဲ့။
သူုဆီ အခစားဝင် ။
ကောင်းတာတွေ ဆင်မသွားနဲ့ 
၀တ်သွားတဲ့ စိန်နားကပ် ချွတ်တောင်း ရင်
သူခိုးထက် သူဝှက်၊ ထက်မြက် လက်စောင်း
မချိပြုံး.လေးနဲ့မပေးမကောင်း ပေးမကောင်း
လင်သေမုဆိုးမ၊ လုပ်မစားတတ်လို့ 
မေတ္တာဆိုတာ ဘယ်မှာလည်း? ။
သူ ကံကောင်းလို့ ဘုရင်ကတော်ဖြစ်
မင်းမဲ့ တိုင်းပြည်ဖြစ်နေ။ကြီးဒေါ်ကြီး ဟာ နန်းမတော် မယ်နု။
သူနာပြု ဆရာမလေး ဒေါ်ခင်ကြည်။
ပျားများလို ကြိုးကြိုးစားစား အသေခံတုတ်။
တော်ရုံမိန်းမ ဒီလိုလူ ယူရဲမလား။
ဒီ ကိုအောင်ဆန်းကို ရင်နဲ့ အမျှချစ်
ဘ၀ တစ်ခုလုံး ပေးခဲ့တဲ့အဖြစ်။
ဗိုလ်ချုပ်ဆို .အင်္ကျီအထည်နည်းနည်း
ရှိသမျှ နဲ့ ရောင့်ရဲ
တိုင်းပြည်က ဘာတွေ ထောက်ပန့် မှုပြုခဲ့ပါသလည်း။
ကျမတို့ဘာတာဝန်ကျေ ခဲ့ပါသနည်း။
သူနေတဲ့ အ်ိမ်များ။ ပြတိုက်များဖြစ်။
နေစရာ အိမ်ရယ်လို့ 
ဒေါ်ခင်ကြည်ရဲ့ ဘ၀က ကြမ်းတမ်း။
ကိုယ်ကျိုးစွန့် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်နဲ့ချစ်ဇာတ်လမ်း။
ခလေး (၂) ယောက်နဲ့မုဆိုးမ
နေ၀င်းက လက်စလက်န. အမျက်ရနိုင်တာမိ်ု့ 
တိုင်းပြည်က အလုပ်ပေး သယောင်ယောင်
ဟန်ဆောင် နှင်ထုတ်ခဲ့ ပြီ။
နင့် လင်သေတာ ဒို့ နဲ့ မဆိုင်င်္ပြီ။ကံဆိုးမ သွားရာ မိုး တစက်စက်
အခုလည်း သမီးပါ ဘ၀ဆုံးအောင်
နေ၀င်း မယားပေါင်း အဆက်ဆက်ယူလည်း.
လင်တဆက်ထည်း သစ္စာရှိတဲ့ မုဆိုးမ
အမေ ဒေါ်ခင်ကြည် ကမှ
တခုထည်းသော နိုင်ငံတော်ရဲ့ ထောက်ပန့် သမှု
ဖုန်းဆိုးစပြု နေတဲ့ ခြံဝန်း
ခလေးငယ်ဘ၀က ဖခင်ဆုံးခဲ့တဲ့ သမီး
ဒို့ တွေ တရားမျှတပါ့မလားကွယ်။
ကျေးဇူးမသိ ။ မြန်မာလို့ ပြောရမှာတောင်
ကြာကြာလေ ရှက် ရှက်လာတယ်။
ဒို့ ပြည်သူ အားလုံး
အာဇာနည်မျိုးရိုး ကို ကယ်ဆယ်ကြစို့ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်မြောက်ရေး သို့ 
မြန်မာပြည် နဲ့ အတူ လွတ်လပ်ရန်။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂၁။၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:11 AM0comments
ကေသရာဇာတို့ ၏ ဂုဏ်ရည်.( ပညာရှင်များ၏ ဒုက္ခ)
စာရွက်ရှိသမျှ၊ ခပ်ပေါပေါ ပုံနှိပ်သော
တနေ့ တခြား လေဖေါင်းလာတဲ့ မိုးပျံဘူဘောင်း
ဘဲဥ နဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ဘဲရှိ၊
ဘယ်လို ခလေးတွေ ဖွံ့ ထွားမလည်း။
ခလေးတွေ ဘယ်လိုမွေးလို့ ရမလည်း။
ခလေးတွေ ဘယ်လို ပြုစုပျိုးထောင်မလည်း။
ဂျပန်ကို ငပု နှိမ်ခဲ့ တဲ့ ရွှေဗမာ
အခု ဂျပန်ကို မော့ကြည့်နေရပါရော့။
မိသားစု ၉ ယောက် ၀၀စားလို့ ရ
ခလေးထိန်း အိမ်ဖော်မနဲ့ 
" ပညာကြီးရင် တသက်မဆင်းရဲ" ဆိုလို့ 
ဖတ်လ်ိုက်ရတဲ့ စာ။ တွက်လိုက်ရတဲ့ ကဏန်းသင်္ချာ
နှစ် (၃၀) ကျော် နောက်ပြန်ကြည့်မိတဲ့ အခါ
၀မ်းဝ ခါးလှရေး မလွယ်။
အဖေက သင်ပေးခဲ့တဲ့ အခါ
အားနည်းသူ အပေါ် ကြင်နာတတ်
မင်းလိုလိုက် ဖော်လံဖါး မပြောတတ်တဲ့ အခါ
တနေ့ စာ တနေ့ ကြက်လိုယက်
နွားလိုရုန်းကန်ရင်း နဖုးကချွေး ခြေမသက်
ရှာစားရ သမာအာဇီဝသမားက ဘ၀ပျက်
လူယုတ်မာတွေ ရဲ့ ကြိုးဝိုင်းအလည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:29 PM0comments
ပြည်သူ့ ကျိန်စာ စူးအံ့ရာ၏။
ငါတို့ ချစ်ခင်၊ ခင်ပွန်းလင်သား
လင့်မဲ့ မယား။ အဖမဲ့ သား.
ပြည်သူအများ၊ ခံစား နာကြင်။
ပူဆွေး ငင်ခဲ့ ၊ ၊ဘ၀ပျက်စေ။
အရိပ်ပမာ။ သင့် နောက်ပါလိုက်
သင်၏မယား၊ သင်၏ သားသည်။
ဆာလောင်နာကြင်။ ဘ၀နဲ့ ယှဉ်
ရင်၌ ခံစား.၊ မှန်တရားကို
ဟစ်အော် ကြွေးသူ၊ ရဟန်းရှင်လူအား။
ချစ်သူ ကွေကွင်း၊ နှောင်တဲခြင်း။
ညှင်းပန်း နှိပ်စက်။ သတ်ဖြတ်လျှက်။
ရတနာ သုံးပါး၊ ဦးထိပ်ထားသော
သင့်ကြောင့် ညစ်နွမ်း၊ နေထိပန်းလို
အကျိုး ညီတူ ဖြစ်စေသောဝ်။
သေရာ ပါအောင်။ ကြိုးလုပ်ဆောင်သည့်၊
သင့် ဂလဲ့စား၊ မောဟ များသည်။
သင်၏ ဘ၀င်။ စိတ်နှလုံးတွင်၊
ပုံရိပ် ထင်ထား. ညများချောက်လှန့် ၊
နိုး ထိတ်လန့် မိ၊ ဆန့် မချိအောင်။
နာကြင် စေသား၊ သင့်နှလုံးသားကို။
စွန်းထင်း သွေးနီ၊ သင့်နံမည်သည်
ပုပ်ညှီ နံ့ ဆင်း။ ဆိုးသတင်းဖြင့်
၀ိညာဉ် များသည်။ သင်၏ အပါး
ထပ်ချပ် နားနေ၊ ခြောက်လှန့်ပေအံ့။
အိပ်ကောင်း စားခြင်း။ ပျောက်ရှင်းမလှ
ကျီးပြိုလန့် ခြင်း၊ ဌက်ဆိုး ဠင်းတ
အိမ်ခေါင် နားစေ.။ ပျားစွဲအိမ်မှာ
သင်၏ ကံကုန် မှေးတော့မည်။
မည်သမုတ်တွင်၊ " ရန်ကုန်စင်"ဟု
နှစ်ပေါင်းရှည်ကြာ။ မြို့ ရွှေရွာမှ
မသဒ္ဓါ ( ၁။၂၀။၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 10:39 AM0comments
ရှင်းသန့် တောက်မြူး…ခြည်နေဦးသို့ 
ကြွေလွင့့်အမှောင်။ နီရောင် ဖြာကျ
မိုးသောက် မှသည်၊ အာရုဏ် ဆီသို့ 
နွေးထွေး ကြည်မြ၊ နေ့ သစ် စပြီ
ပန်းငုံ ပွင့်ဖူး၊ နေခြည်ဦး။
ဖြန့် ကျက် ရွှေရည်။ အာကာ ဆီမှ
ဖေါက်တွင်း ကျခဲ့ ၊ မှုန်ယဲ့ယဲ့လျှင်
ဌက် သာရကာ၊ အစာ ရှာကြ။
တေးချို ဆိုမြ။ ခွန်းဆက် ကြပြီ။
ပျော်ရွှင် ဆော့မြူး၊ နေခြည်ဦး။
သုတ်ဖြူးနေခဲ့။ သုန်နွဲ့ နွဲ့့လျှင်
ဘ၀င်ကြည်မြ၊ အမော စပြေ
ဆက်လျှောက်နေတော့။ ဇွဲမလျှော့နဲ့ ၊
အရှေ့ ဆီဝယ်၊ အမှောင်ဖယ်တော့။
ဆွတ်ပျံ့ ကြည်နူး။ နေခြည်ဦး။
မသဒ္ဓါ (၁။ ၂၀။ ၂၀၀၈)
တောက်ပကြည်လင်.အမိမြေကို အလှဆင်သော.နေခြည်ဦးသို့ 
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:26 PM 1 comments
ဆက်သွယ်ရေးဒေသ၊ ပြင်ပ ရောက်သည့်တိုင်
မီဒီယာ အပြင် မထွက်အောင်
တိုင်းပြည်ကို ခြင်ထောင်ချ လျှက်
လွတ်လပ်မှု အကင်းဆုံး ဆုတံဆိပ်ရလျှက်။
ဒါ နအဖရဲ့ လုပ်ချက်။
နိုင်ငံဟာ တံတွေးခွက်ထဲ ပက်လက်။
လူကြီးမင်း တို့ ရယ်၊
ဒီလူတွေနဲ့ရှေ့ လမ်း ဘယ်လိုဆက်သွား
ခလေးတွေရယ်။။ လူကြီးတွေက သနားတယ်။
ဒီ လူယုတ်တွေ ဘေးဖယ်မှ ဖြစ်တော့မယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးသယ်လာမဲ့ ၊ ကုလ ကိုယ်စားလှယ်..
သူ့ ပြည်တော်ဝင်ဖို့ အရေး
အမျိုးမျိုး မဟုတ်တယုတ် ဆင်ခြေပေး။
သတင်းစာထဲ၊ လူ တွဲ လမ်းလျှောက်ပြ
အများတွေများ သနားကြမလားလို့ 
မင်းကတော့သေလူ။
ဂန်ဘာရီ နဲ့ မတွေ့ ရဲ
ဒေါ်စုကြည်နဲ့ မတွေ့ ရဲ
သတ္တိစွမ်းရည်။ ဗျတ္တိလုံ့ လ နည်းပါးသူ
ဒါနဲ့ များ မတန်မရာ
နံပါတ် ၀မ်းနေရာ လိုချင်သူ။
လုပ်ပေးတော့၊ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ
အသေခံချရင်လည်း..ပြည်သူ့ က သွေးရဲ
နအဖ ကို ပြည်သူဒီလောက်မေတ္တာရှိတာ.
တွေ့ သမျှလူ၊ သူတို့ ရဲ့ရန်သူ။
မျိုးချစ်စိတ် ဇာတိမာန်တွေ ဆိုတာ.
ရေလိုဘဲ ဘယ် ဖြတ်မရ.
ဆီလိုဘဲ အပေါက်ရှာ ထွက်ကြ။
၂၀၀၈ မှာ..နအဖကိုလွှမ်းမိုးမယ်။
ပြည်သူ့ တိုက်ပွဲ ဆိုတာ
အမြဲ မိုက်ဇာတ်နဲ့ သာဆုံးတယ်။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၁၈။၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:59 AM0comments
လုံအောင်ထိုင်နေ..ပြီးမှ မပြောမရှိနဲ့ 
လူယုတ် နအဖ ကမဖြုံသေး။
တရက်တရက်. တိုးတိုး ပိုညစ်။
တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်း ပိုနင့်နင့်စေ။
နအဖ ဆင်တဲ့ ဗုံး..
တစ်လုံး ပြီး တစ်လုံး.
ပြည်သူကို မျက်လှည့် လာပြ..
ချောက်ကမ်းပါးအောက် တိုင်းပြည်မကျဖို့ 
စစ်တပ်ဘဲ ဆက် အုပ်ချုပ်ကြစို့ 
ယောက်ျားသား ကိုရီးယား ကျွန်ခံသွားရတော့မယ်။
တပြည်လုံး AIDS ပြန့် နှံ့ ။
အတိုက်အခံက၊ ပြည်သူ့ဘဏ္ဍာမစား
စစ်တပ်ဘဲ ဖြဲကား စားနေတာ.
ခွဲချင်းခွဲရင် စစ်တပ်ထဲ လာခွဲ
အိမ်သာထဲ ။ ဘူတာထဲတော့ မခွဲဘူး ကိုယ့်လူ။
မပိုင်ရင် ခြင်တောင် မရိုက်သေးတဲ့လူ။
နေပြည်တော် ၀န်ကြီးအိမ်တော်တွေ ဗုံးကွဲ
သန်းရွှေသာ ဗန္ဓုလ လို သေပွဲဝင်ရင်
ဟင်း ဟင်း ဟင်း..
ပြည်သူတွေ အသက်ကို စတေး
မင်းတိ်ု့ ခွေးကျင့် ခွေးကြံ
ဒီ တနည်းဘဲ ကျန်။
ဒို့ တတွေ အသက်ပေးတော်လှန်
မင်းတို့ အသက်၊ ဖက်နဲ့ ထုတ်ထားကြရန်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:02 AM 1 comments
ရှက်…ရှက် … ရှက်.
မှန်းချက်နဲ့နှမ်းထွက်
ရီမရ ငိုမရ ..ခပ်ခက်ခက်.
မာစတာကြီး ထောက်ပန့် မဲ့
မဲခေါင်ရဲ့ ဖွံ့ ဖြိုးမဲ့ ငွေ၊ မျိုးမျိုး မြက်မြက်။
တစ်ပြား ရရ၊ နှစ်ပြား ရရ
အဘကြီးက လက်ဖြန့် ခံခဲ့ပါလေတဲ့..
အခုမှ လွတ်တဲ့ငါးက ကြီး
လောဘကြီးလို့အီးလောက်ရ။
စစ်စရိတ် ထောက်ပန့် ဖို့ လို
ကြံ့ဖွတ်တွေ ဒေါ်လာပေး လူရိုက်စေဖို့ 
ပတ်ချွဲ နှပ်ချွဲ ၊ အပြောကောင်းကောင်း
သူ့ လူ သတင်းထောက် ကိုသတ်.
ပျောက်နေတဲ့ ကင်မရာတောင် မရှာတတ်.
လူဆိုး သူခိုး.ဂျပိုးနဲ့ ပေါင်းတဲ့ ရေမြေ့ရှင်။
ဖြန့် နေ မင်းလက် ပလာသက်သက်။
မိသားစု ရှင်ကွဲ၊ ရင်ကွဲပက်လက်
ကိုရီးယားကို ကျွန်ခံရန်ပို့ 
စင်္ကာပူ အိမ်ဖေါ်လုပ်ရန်ပို့ 
နဖူးက ချွေးကျ မှ ရမဲ့၊
အခန့် သား...၁၀ % နအဖ ခေါင်းပုံဖြတ်ကာ.
တဖြေးဖြေး တတိတိ၊ လျှော့ကျခဲ့တဲ့ ပညာတန်ဖိုး
ဒို့ ဦးဏှောက်တွေ နအဖ ခိုးနေခဲ့ပြီ။
တိုက်ပွဲ ၀င်ရန် နှိုးဆော်ပါသည်။
အာဇာနည်တို့ သွေး..နီရဲစွေ့ စွေ့ ၊
ဒီလိုမှ မစွန့် ရဲက
နောင် အနှစ် ၂၀ ၊ ပညာတတ်သူရှား
ဒါ အမျိုးသားရေး တာဝန်တွေ.
ဗမာပြည်ကြီးကို ကာကွယ်ကြပါစို့ ။
မြေးများသို့ ကောင်းမွေ ထားခဲ့ကြဖို့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:21 AM0comments
အမျိုးသား အကျိုး စီးပွား..အဲလေ
( နအဖ ရဲ့ အကျိုး စီးပွား)
ထိခိုက်မဲ့ သတင်း၊ မှန်တဲ့ သတင်း
နအဖ၏ မူဝါဒ၊ လိုက်နာကြ
ကွယ်ရာဆို ယားတောင်နားရွက်မကုတ်နဲ့ 
လမ်းပြမြေပုံ ၇ ချက်အကြောင်း
ယောတောရှိ ကြောင်း၊ အဖား ကောင်းမှ။
စလောင်း ပိုင်သူ၊ ကြည့်စရ်ိတ်တိုး
အထူးနှုန်းကလေးနဲ့too.slow။
နစ်နေမန်း၊ ကိုထိုက်နဲ့ 
မသဒ္ဓါ ဆိုတဲ့ ကောင်မ..
CID တွေ အမြဲလာလာ check
နေ့ စဉ်နဲ့ ရက်ဆက်။
တပြည်လုံး သူတို့ ဘဲ။
ပါတီ အဖွဲ့ ဝင်မှန်သမျှ၊
ကြည့်မရပုဒ်မ နဲ့ သာဆွဲဟ။
ချီးထုတ်နဲ့ သာပေါက် ဟ။
လောက်လေးနဲ့ သာ ဆော်ရဲပစေ။
ကျောက်ရောင်းငွေနဲ့ပေးမဲ့
ကိုရင်ငယ်တောင် မချန်ရစ်နဲ့ ။
တိုင်းပြည်ရဲ့ ရှေ့ ရှောက်လမ်း
ဗမာမှန်သူ။ ဇာတိမာန်ကို ပြသကြ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:50 AM0comments
တုတ်နဲ့ ခေါင်းကို နှက်။
ဒင်းတို့ ရဲ့ ယုတ်မာရက်စက်မှု
ငါ့ သမီး သူမဟုတ်၊ မင်းတို့ မုဒိန်းသာကျင့်နှင့်။
ကာယကံရှင် ဆွေမျိုး မိဘ၊ လက်မှတ်ထိုး
အဆိုး နဲ့ သူခိုး ယိုးတဲ့ အပြစ်
မသဒ္ဓါဆီ စာပို့ ရစ်ပါ။
တကမ္ဘာ လုံးသိအောင်ဖြန့် ပေး
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:20 AM0comments
အိမ်မွေးကြက်မို့ ..ရိုက်မချက်ဖူးမထင်နဲ့ 
စလောင်းကိစ္စနဲ့ ငြိတဲ့ အခါ
ငါ့ အီးပေါက်တဲ့သတင်းလေးဘဲ အပြင်ထွက်ကြည့်
မြန်မာ့ တိုင်း မို့အချင်းချင်း
လက်ရှောင် မဗြင်းဘူး မထင်နဲ့ ။
ဘုရင်စုတ် တွေ သွေးပျက်နေတယ်။
နအဖ သတင်းအမှန်သာ ထည့်ကြည့်
ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) နဲ့ငြိသွားမယ်။
http://www.rfa.org/burmese/thadin/2008/01/15/myanmar_times_banned/ ၏ သတင်းအားကိုးကားထားပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:54 AM0comments
အမေရိကန်က ဘယ်လို၊ ရုရှားက ဘယ်ဝါ ၊ တရုပ်နဲ့ ကုလားက ဘယ်ချမ်းသာ၊ ငြင်းမနေကြပါနဲ့တော့ ။ ဒီက ကိုယ့် ကိုယ်ကို ခေါင်းဆောင်တင်ထားတဲ့ အရူးကြီး တွေ တစ်ရက်ကို ဘယ်နှစ်နာရီများ တိုင်းပြည်ကောင်းစား ရေး စဉ်းစားဘူးသလဲ။ စင်္ကာပူ မှာ ၁၅ဒေါ်လာပဲ ပေးရတဲ့ ဟန်းဖုန်းကဒ်က ရန်ကုန်မှာ သိန်း၃၀ ဖြစ်နေတာ ဗမာပြည် ကောင်းစားရေးလား။
ခုနက ဦးပွကြီးပြောတဲ့ အိန္ဒိယမှာ ဆလွန်းကား တစ်စီး ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၊ ဗမာငွေနဲ့ဆို ၃၂ သိန်းလောက် နဲ့ဝယ် လို့ရတယ်တဲ့ ။ အခုဒီမှာ ဈေးကြီးနေတာ တိုင်းပြည် ကောင်းစားရေးမူဝါဒ လား။
ရဲ ရဲ့လစာ နဲ့ သူ့မိသားစု ဘယ်လောက်ပါ့မလဲ။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကြောင်းပြချက်နဲ့ဘဲ သူခိုး ဓမြ ဘ၀ကို ခံယူမှာ လား။ အဲဒီလို ရတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့ သူဌေး လုပ်မှာလား။
အမှန်ကို ရင်ဆိုင်ကြစမ်းပါ။ ဆက်ကြေး မတောင်း၊ မခိုးပဲ ဘယ် ရဲကများ နေနေလို့လဲ။ ၀န်ထမ်း ဆိုသူတွေ လည်း ဒီလိုပါပဲ။ ရုံးက ဓါတ်ဆီထုတ်ရောင်းတာ အပြစ်ကင်းရဲ့လား၊ ကုသိုလ် လား၊ သူခိုး အလုပ်လား၊ ဗမာဆို တာ သူခိုးမျိုး လား၊ သူခိုးကြီး ကို ဆရာတင်ပြီး သူခိုး တပည့်ဘ၀နဲ့ သေတော့မှာလား၊ လစာက မလောက်လို့ ပါတဲ့ ၊ မိသားစု အားလုံး အလုပ်လုပ်တာ မလောက်သေးဘူးလား။ ဟိုအရင်က ဗမာပြေမှာ တစ်ယောက်လုပ် ရင် တမိသားစုလုံး ထိုင်စားလို့ရတယ်ဆို။ အဲဒါ ဒဏ္ဍ္ဒာရီ လား ။
ဘယ်ကဟုတ်ရပါ့။ ဗမာပြည်မှာ ပိုက်ဆံတွေကို အတိုင်းအဆမရှိ ရိုက်ထုတ်ပြီး ဖြုန်းနေတာ အာဏာရူးတွေ ကြောင့် တိုင်းပြည် နာတာပေါ့ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း ငွေစက္ကူတွေ ဘယ်လောက်ရိုက်ထုတ်သုံးပြီးပြီလဲ ဘာလို့ ရိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့ ငွေပမာဏကို မကြေငြာရဲသလဲ အဲဒါ ခိုးနည်း ၂၅ မျိုး ထဲက တမျိုးပဲ ၊ အာဆီယံမှာ တိုးတက် နေပါတယ် ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေ မှာရော ဒီလိုပဲလား။ တရုပ်ပြည် လဲ ဒီလိုပဲလား ဘယ်ကဟုတ်ပါ့မလဲ ။
ဘယ်အစိုးရ ကမှ ပိုက်ဆံကို ထင်တိုင်းကြဲ ရိုက်ထုတ်ခွင့်မရှိဘူး: ကဲ ပြောစမ်းပါ ၊စင်္ကာပူ ဘယ်လို တိုးတက် ခဲ့သလဲ ၊ တရုပ်ဘယ်လို တိုးတက်ခဲ့ သလဲ ၊ ၁၉၈၈ ထဲက ပညာရှင်တွေ၊ သာဓု ခေါ်လောက်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေ ဘာတွေများရှိသလဲ ။ တိုင်းပြည်မှာ မြို့တော်အသစ် တည်တယ်ဆိုတာ ဂျော့ဘုရှ ပူတင် ကျန်ဇီမင်းတို့ တစ်ဦး တည်း တစ်ယောက်တည်း ဆုံးဖြတ်လို့ရတဲ့ အရာမဟုတ်ဘူး ။
အစိုးရ ကက်ဘိနက်အဖွဲ့ ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် နဲ့တောင် မြို့တော်အသစ် ဆိုတာတည်လို့မရပါဘူး ။ အခြေခံဥပဒေမှာ ဒီလိုပါ လေ့ပါထမရှိဘူး ။ ရန်ကုန်ဟာ ဘယ်အချက်တွေနဲ့များ မြို့တော် မဖြစ်သင့်ရသလဲ။ အဲသလိုမျိုး တတိုင်း ပြည်လုံးရဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို ငါ့ပိုက်ဆံ အထင်နဲ့ ရှောက်သုံးနေတာ ပြည်သူ့ခေါင်းဆောင် လား။ ဓမြခေါင်းဆောင် လား ၊
စစ်တက္ကသိုလ်က ပညာရေးတက္ကသိုလ် တွေလိုပဲ ပညာရှင်တွေ မွေးထုတ် ပေးနေတယ် တဲ့ ၊ ဒီမှာ . . .ပညာရှင် ဆိုတာ သူတတ်တဲ့ပညာကိုပဲသစ္စာခံတယ် ၊ ပညာကမှားတယ် လို့ပြောတာကို အမှန်လို့ ဘယ်တော့မှ မလိမ် ဘူး။ တက္ကသိုလ်က ဘွဲ့ပေးလိုက်တယ်၊ ပညာရှင်လေး လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းတော့ ၊ အရာရာကိုပညာနဲ့ သာ ဆုံးဖြတ်တော့ ၊ လောကကို ပညာနဲ့ အလှဆင်တော့ ၊ ဘ၀ကို ပညာ နဲ့ တည်ဆောက် တော့ ၊ တိုင်းပြည် ကို ပညာ နဲ့အကျိုးပြုတော့ ၊
စစ်တပ်ကဘွဲ့ပေးလိုက်တယ်။ လူငယ်လေး ငါ့ထံ ဒီတစ်သက် ကျွန်ခံလေတော့ ၊ အရာရာ ငါခိုင်းတာလုပ်တော့ လောကကို သေနတ်နဲ့အနိုင်ကျင့်လော့ ၊ ဘာမဆို မျက်စိမှတ်ခိုင်းတဲ့ အတိုင်း လုပ်တော့ ၊
သန်းရွှေဟာ အဖေပဲ အမေပဲ။ ဒီလောက်ဆို တို့တတွေအားလုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို မှန်ထဲ ရဲရဲကြည့် ၊ ငါ အခုဘာ လုပ်နေသလဲ ၊ ပညာသုံးပြီး ဘ၀ရဲ့အရှင်သခင်လား၊ သူများရဲ့အာဏာရူးလက်ဝေခံလား ၊ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီး နေမိပြီလား၊ စဉ်းစား စဉ်းစား
တစ်ရာနှင့်တစ်ရက် မသိမှုကို ဆရာတင်၊ နှစ်တစ်ရာ အသက်ရှင်ရခြင်းထက် သိမှုပညာကိုအဖော်ပြု၊ တစ်ရက် အသက်ရှင်ရတာက ပိုပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဆိုတာ ဒို့ ညီအကိုတွေ သိလာမှာပါ။ လုပ်သင့်တယ်ဆိုရင် ဒီစာတွေကို ဆိုက်ပေါ်တင်ပေးပါ
(၁။၁၅။၂၀၀၈မသဒ္ဓါ ၏ cboxတွင် လာေ၇ာက်ဆွေးနွေးပေးသော..မောင်မောင်မသိ ၏ အကြံပေးစာဖြစ်ပါ သည်။ ကျေးဇူး တင်ရှိပါသည်။ နောင် လည်း လာရောက်ဆွေးနွေး နိုင်ပါသည်ရှင့်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:18 AM0comments
တကယ်..စူးတဲ့ ၊ နအဖ ရွှေဥာဏ်တော်၊
စတုရန်းမိုင်ပေါင်း ၂သိန်း ၆သောင်း
တောင်မှမြောက်ဆီ မိုင် (၁၂ရ၅) မိုင် ရှည်လျှား
အပူ အအေးပိုင်းဇုံမျဉ်း က
အပူုပိုင်းနဲ့သမပိုင်းဇုံရာသီ
မုတ်သုန်ရာသီနဲ့ ခြောက်သွေ့ ရာသီ
အနောက်၊ ပဲခူး၊ ရှမ်းရိုးမ တို့ 
ရေရရေး ပေါ် မူတည်။
ရာသီဥတု ပေါ် မူတည်၊
မြေဆီနူ ပေါ် မူတည်။
မွန့်ပြည်က ရာဘာ၊ ချင်းတောင်ပန်းသီး.
ရှမ်းပြည် လက်ဖက်၊ ရွေးချယ်လျှက်
ထွက်မဲ့ စိုက်ကုန်၊ သီးနှံစုံ။
အလယ်ဝှမ်းမှာ၊ ဆီ ပဲနှမ်း
၀ါဂွမ်း နဲ့ ပြောင်း ဆေးပင်။
မြစ်ဝကျွန်း ပေါ် တွင် စပါး.
ခြောက်သွေ့ ရပ်ဝန်း တခွင်
အနော်ထာရဲ့ တန်ခိုး.ဆည်ရိုးတာဖွဲ့ 
ဆည်တွေ ဘယ်လောက် ဖောက်ဖောက်
ဆည်ရေတွေ ဘယ်လို သောက်သောက်
ယနေ့ ထိ မိုးခေါင်ရေရှား
နံမည်ကျော်တဲ့ ခြောက်သွေ့ သုံးခရိုင်
မကွေး နဲ့ချောင်းဦး.
မြေဆီလွှာမွဲ။ ရွံ့ နုန်းသဲမြေ၊
ရေမနေ။ နေရှိန် ခမ်းခြောက်
နိုင်ငံပို့ ချင်လို့စပါး လိုက်ရှာ။
လေထဲ ဆောက်တဲ့၊ နအဖရဲ့ စီမံကိန်း
ရေမှ မထိန်းနိုင်တဲ့ သဲနုန်းမြေ.
စပါး စိုက်ပါလေ တဲ့။
တော်လိုက်တဲ့ လူကြီးမင်းတို့ အကြံ။
သကြားမင်း လာစိုက်ပါ တောင်
အပင်မပေါက်နိုင်ပါ တဲ့ စပါး။
တောင်သူလောက်မှ မင်းတို့ မတတ်
အခု တမျိုး၊ တော်ကြာ တမျိုး
လူကြီးမင်းတို့ ၊ စီမံကိန်းလုပ်ရပ်၊
အဲဒါ..ဘယ်သူ့ ရဲ့ လက်ချက်။.
ကျွဲချိုမှာ နို့ ညှစ်။
ဒါ နအဖက ဆင်ကြံကြံ.
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:57 PM 1 comments
BBC,VOA, RFA, ဆိုတာ
လေလှိုင်းထဲ က အသံ။
တွေးကြည့်..ပြည်သူ အဖက် မလုပ်တာသာကြည့်။
သူတို့ က ဝေသာလီပြည်။
မသဒ္ဓါ ဆယ်လေး တစ်လေးပေး။
ဒို့ ပြည်သူ မုန်းတာ ဘယ်လူ.
ယောက်ျားပီပီ. သတ္တိ၊ ဗျတ္တိ
ပြည်သူ တံတွေးစက်နဲ့ တွေးရုံနဲ့ 
မင်းတို့အသက်
မသဒ္ဓါ ( ၁။၁၃။၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:23 PM0comments
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:47 PM0comments
တနေ့ နေ၊ ကိုယ် ဖြစ်မလား.
ပြည်သူ့ စစ်သား ၊ မောင်ထွန်းသာ၊
ရဲသားကြီးက ကိုလှရွှေ။
ဒို့ လုံမေက၊ မခင်မြ။
မောင်သိန်းတန်က ၊ စာပို့ သမား။
တပ်မတော်နေ့ တိုင်း၊ ပန်းတော်ဆက်။
မမှီခဲ့တဲ့ ။ ဇူလိုင် (ရ).
ဒီလောက်ထိ၊ ကျမက ယုံ။
စက်ဆုတ်ရွံ့ မုန်း။ တဖြေးဖြေးမေတ္တာတုံး။
၂၀၀၇။ ဘုန်းကြီးနဲ့ စစ်ဖြစ်။
ကွဲနေတဲ့ ခလေးလေး ရဲ့ခေါင်း၊
တိုင်းပြည်ရန်၊ တွန်းလှန်ပေးမဲ့ 
စစ်အာဏာရှင် ပြည်သူတို့ ရဲ့ရန်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:41 PM 1 comments
ဗုံး.. ဘုံးထားတဲ့ငွေ နဲ့ ခွဲတဲ့ဗုံး
ဟို မှာတစ်လုံး…ဒီ တစ်လုံး
ပြည်သူတွေ ထဲ ဒို့ မခွဲ
နှစ် ၂၀ ၊ သူတို့ ဗိုလ်စွဲ
ဒီ ဗုံးပစ် ။
လွှဲချွကရင့် အပြစ်။
ကိုကရင်တွေ မျိုး ပြုတ်ပြုန်း
ကျောင်းသားအဖွဲ့ဗုံးထောင်လျှင်.
တေဇ ကသာ ဗုံးဝယ်တာ.
ဒို့ တတွေ ငွေမရှိပါ။
ဘုံးထားငွေ နဲ့ဝယ်တဲ့ဗုံး
ဒို့ တွေမှသာ ကယ်တင်တတ်.
ဒို့ ဘဲ ပြည်ချစ်သည်။
ဒို့ ဗုံးတွေ လာနေ။
သန်း (၅၀) သောပြည်သူ့ ဗုံး
မသဒ္ဓါ (၁။ ၁၃။ ၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 1:37 AM0comments
အကန်းက မော့တော့တော့၊ ကျောကော့နေတာက ဒို့ တိုင်းပြည်
ရှေးသရောခါ ၊ ရွှေဗမာဝယ်
အကြံ နည်းပါး၊ ဦးဏှောက် ပါးလျှား။
ဘုရင် ကိုဖား၊. အောက်လူ အားဖိ
အနံ့ သာသိ။ ထိတွေ ကိုင့်ကြည့် ။
အဆင်းမသိ၊ အချင်း မရှိ။
စက္ခု နတ္ထိ၊ မဲမှောင်သည့် ကမ္ဘာ။
ဘယ်သို့ သောအရာ သူတို့့မသ်ိရှာ။
ဘာကောင်များလဲ၊၊ စူးစမ်း လိုခိုိက်၊
အကြီးဆုံး သန်းရွှေ။ မရဲတရဲ ရှေ့ တိုး.
“ အော် ဆင် ဆိုတာ
တတိယ ရွှေမန်း။ ယောင်အအ
ကြောင်တောင်ကန်း။ စမ်းမိတာက နှာမောင်း
သွယ်ပြောင်း ရှည်လျှား၊ ရှူးရှူးရှားရှား
“ အား ပါး ပါး ..ဆင်ဆိုတာ..မြွေကြီး ပါ လား.”.
“ ဆင်ဆိုတာ၊ တိုတုတ်သည့်
အိမ် တိုင်ငုတ် အသွင်ရှိ။”
ခတ်နေတဲ့ ထန်းယပ်တောင်ရွက် အတိ” ။
အီးအီးစော်နံ နေတဲ့ .ကြိုးလေးတချောင်း။
ကျနော်တွေ့ တာကမှ မှန်ကန်ကြောင်းတဲ့။”
ဆင် ရဲ့ အကြောင်း
ကိုယ့်အထိ ဘဲ ကိုယ်မှန်။
ဘူးက ခံခံ။ ပေါက်တဲ့နဖူးမထူး
မဟုတ်တဲ့ idea တွေ စ.စ
ဗမာပြည်မှာ လက်နက်ပြ ကောင်းစား
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:48 PM0comments
မေတ္တာတရားနဲ့ သာသနာ့စစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းလမ်းလျှောက် ပြည့်အာဇာနည်။
ရစ်သမ်းမိုးသောက်၊ နေ့ သစ်ရောက်ပြီ။
ဇန်န၀ါရီ (၄)ရက်၊ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ က
အောက်သို့ အဆင်း၊ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ 
ဘုန်းဘုန်းရဲ့ အဖိုး၊ လက်ဖမောင်းခတ်
" ဒို့ တွေ ဗမာ လွတ်လပ်၊ ဥဒါန်းသစ်တစ်ရပ် " တဲ့ ။
နောက် (၁၉၆၂) နှစ်၊
အမေ သောကရောက်လို့နေစဉ်ငို။
မသေအောင်တဲ့ ၊ ပေးခဲ့တဲ့ သာသနာ့အမွေ။
ပထမကျော် ငယ်.လတ်. ကြီး၊
သာသနာ့ ကျောင်းသားမို့ 
၂၀၀ရ။ ကံဆေါင်တဲ့ အခိုက်။
ကံဆောင်စာရင်းမှာ ပါတာမို့ 
အားနာရွှေရင်ဆို့ သော်လည်း အမေ
ဘာငွေမှဆက်လက် မထောက်ပန့် ပါရန်။
ရဟန်းအမ စစ်သည်ရဲ့ မယား။
မယ်တော် သားကိုခွင့်လွှတ်ပါ။
သာသနာ့ ၀ိနည်းကို ရိုကျိုးတဲ့
မယ်တော်မုန်း တော်မမူပါနဲ့ 
၂၀၀၈။ လွတ်လပ်ရေးနေ့ 
ပရိက္ခရာ ရှစ်ပါး၊ သပိတ်အားလွယ်။
(ရ၀) မိုင် ဆန္ဒုပြခရီးကြမ်း။ မမောတမ်းခရီးနှင်။
မသဒ္ဓါ (၁။၉။၂၀၀ရ) သီရိလင်္ကာမှ ကိုယ်တော်များသို့ကိုယ်နုတ်နှလုံးပါး ဖြင့် ရိုသေမြတ်နိုး ရှိခိုး ပူဇော်ပါ၏ ဘုရား။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 3:32 AM 1 comments
ရွှေ ပြည်ကြီးကို။ မတရားဒါးမိုးရွှေတွေခိုးနေတဲ့ ရွှေအမျိုး.
နုပျိုအောင် ဆေးဆိုးမြဲရွှေဘိုးတော်ကြီးရဲ့၊ မျောက်မူးလဲ ။ရွှေဥကလေးနဲရွှေရွှေ မြေးတော်ရွှေတွေ စားပြီး၊ရွှေချေးတော် ပါဖို့ 
ရွှေကမုတ်နဲ့ ၊ အီးအီး ယိုရွှေတစ်သျူးနဲ့ ၊ အီးအီးကုန်း။
ပညာတတ်၊ စစ်တက္ကသိုလ်ဆင်း ဗိုလ်က
အရေးမပါ တဲ့ မျိုးမစစ်။
တော်ဝင်ဘရူနိုင်း၊ စော်ဘွား တောင် ငိုသွားရမယ်။
ဘာတွေလဲ၊ အရပ်ကတို့ 
ပါချုပ် အဆင့် တတ်တဲ့ Ph.D ပညာ..
ရွှေမြေးရဲ့ အီးအီးကုန်းစရာ၊
သမားရာထူးနဲ့ ၊ သူမတန်၊
၀တ်လုံ၊ ရှေ့ နေ တရားသူကြီး။
ဆင်တူ ပုဆိုး၊ တိုက်ပုံကျကျနန
ပုတ်သင်ညို ၊ ရာထူးလိုချင် ခေါင်းလေးငြိမ့်။
ကြံ့ဖွတ်ရဲ့ စာမျက်နှာပေါ်က မင်းဓါတ်ပုံ။
တောလုံးပျောက်ဆုံး၊ .တောနေ သတ္တ၀ါတွေ မျိုးပြုန်း
သဘာ၀၀န်းကျင်။ ထိမ်းသိမ်းနိုင်ဖို့ မမြင်။
ရှေးဟောင်းအမွေ။ စေတီပေါတဲ့ အမိမြေ.
စင်္ကာပူမှာ ဗမာ၊ အိမ်ဖေါ်ဈေးကွက်သွက်။
တက္ကသိုလ် ပညာ၊ အိမ်ဖေါ်လုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။
အာဏာနဲ့ ပြ ၊ ခိုးခံရတဲ့ ပညာများ
စစ်အစိုးရရဲ့ ၊ စံနစ်တကျသွေးခွဲ ပညာများ
မပြောင်းနိုင်ရင် ၊ မတော်လှန်နိုင်ရင်.
နောင်အနှစ် (၂၀)မှာ၊ ဗမာတပြည်လုံး ဖာ။
တနိုင်ငံလုံး မှာ AIDS ရောဂါ။
ဒို့ နိုင်ငံ စင်္ကာပူလိုဖြစ်နေပြီ၊
ဒီလိုနဲ့မိုးကြီးချုပ်တော့မလား.
လာပါ..အားလုံး နိုင်သလောက် ဒို့ စွမ်းဆောင်
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 6:10 AM3comments
(မင်းချင်း) .. မှန်ပါ့မင်းကြီး၊
အအားမနေ။ ၈၈ ကျောင်းသားတွေ။
နည်းနည်းကလေး၊ ဆုံးမထိုက်လို့ ။
မိန်းမအပေါင်း၊ ဘောင်းဘောင်းတွေပို့ လိုက်တာ.
ကျုပ်ဓါတ်ပုံလှလှ မီးရှို့ ကြသတဲ့.
ဒီတခါလည်း. နွားက လာနှောက်ယှက်.
ရွံ့ ထဲရုန်းကန်၊ အားကျိုးမာန်တက်
လယ်ယာထွန်ယက်၊ ပြည်သူ့ တွက်။
လောင်စာဆီနဲ့ ၊ မန်နေဂျာဘော်ချက်။
ဗမာပြည်နေ ကျုပ်တို့ နွားဖြစ်ရှူံး
စပါးနဲ့ ငါး၊ နွေစပါး၊
မပြောင်းချင်လို့ တဲ့ ပြောင်းဖူး။
စပါးလှေ့ လည်းနွား။ သေခါနီးလည်းသတ်စား
ငရဲ မကြောက်. သံသရာ မကြောက်.
မေ့မေ့မူးမူး ။ ဘုန်းကြီးရုးနဲ့ လှေလူး..
ရှက်ဖူးဗျို့ရှက်ဖူး။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:37 PM 1 comments
မဟောင်းနိုင်တဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင် (သို့ ) ကောသလမင်း၏ အိမ်မက်များ
ပသေနဒီ ဘုရင် မင်းကောသလ..
မက်ခဲ့ ရတဲ့ ကြောက်အိမ်မက်..
(၁) အရပ်လေးမျက်နှာ၊ လာလတ်တဲ့
( နောင်အခါဝယ်. ၊ တရားမဲ့မင်း
ထစ်ချုန်းမိုးသား ၊ မိုးကားမရွာ
ခမ်းခြောက် ကြာသော်။ သီးနှံ ပျက်စီး.
ငတ်မွတ် ပြီးလျှင်၊ ဆင်းရဲ ကပ်ဆိုးဖြစ်လတ္တံ)
(၂) အပင်သေးငယ် ။ နုငယ်ပါလည်း.
( နောင်ခါဆုတ်ယုတ် ၊ ကာလယုတ်တွင်
သက်တမ်း တိုရ၊ လူဘ၀၌၊
(၃) နွားသူငယ် နို့ ၊ နွားမေစို့ သည်.။
( နောင်သောအခါ ၊ ငယ်သူထက်မြက်
အကြိုက် ဆိုပေး။ အသက်မွေးလတ္တံ။)
(၄) အားမာန်ကုံလုံ၊ နွားကြန်စုံက
(တရားမရှိ ၊ မင်းမိ်ုက်၏လက်
ခံတွင်း နှစ်ခု၊ စားသောက်ပြုသည်.
( တရားမစောင့် ၊ ထို မင်းကြောင့်လျှင်။
(၆) မျိုးယုတ်မွဲအို၊ မြေခွေးဖိုသည်
ယုတ်ညံ့ကျင်ငယ် စွန့့်လေ၏။
( မင်းဆိုး မင်းညစ်၊ အုပ်စိုးရစ်သော်.
(၇) ယောင်္ကျားတပါး ၊ လွန်ကြိုးကျစ်သွား.
ကျစ်လိုက် စားလိုက်။ ကုန်လေ၏။
(၈) ရေမရှိအိုးများ၊ ခြံရံထားသော
(၉) နက်ရှိုင်း ရေကန်၊ ရေသောက်ကန်
( တရားမဲ့မင်း၊ ကြမ်းကြုတ်ခြင်း.
မြို့ ပြများကို၊ စွန့်ခွါသွားစေ၊
(၁၀) အိုးတစ်လုံးမှ၊ ချက်သောဆွမ်းဖြူ
အပေါ်ပျော့ပြဲ ၊ ဆွမ်းလဲမညီ။
( မင်းဆိုးတရား၊ မစောင့်ငြားသော်
ကောက်မျိုး သုံးထွေ ပြားလတ္တံ့။)
(၁၁) ငွေတသိန်းတန် စန္ဒကူးနှစ်မှန်အား
အဖိုးမွဲမွဲ၊ ယက်တက်ပုပ်ရည်ဖြင့် လဲ
( ဗုဒ္ဓရှင်၏ ။သာသနာတော် ဆုတ် ကာလ
လူအလဇ္ဇီ တို့ လက်ထက်။
ဆွမ်း၊ ဆေး၊ ကျောင်း၊ သင်္ကန်း
အလွဲသုံးစား ၊ ဟောပြောကြားမည်)။
(၁၂) ဘူးတောင်း ရေနစ်။ မပေါ်ဖြစ်တော့၊
( ပညာမဲ့မင်း။ အုပ်ချုပ်ခြင်းဖြင့်၊
(၁၃) လေးလံ ကျောက်ဖျာ၊ ကဗ္ဗလာသည်
(၁၄) အဆိပ်မဲ့၊ ဖားငယ်မ
( ပြင်းသော ရာဂ၊ လူအို တို့က၊
နွားအိုမြက်နု ။ ရာဂမှု ကြောင့်
မယားကနိုင်၊ လွှမ်းမိုး ပိုင်၍
(၁၅) မည်းနက် ရုပ်သွင်၊ ရှုအဆင်းဆိုး
ကျီးမျိုးတို့ကို ၊ ရွှေ၏ အဆင်း
မျိုးမစစ်သူ။ ကျေးကျွန် လူအား။
ထီးနန်းပေးစေ။ စံစားစေ ၍
တတိုင်းပြည်လုံး။ ဖွဲမီးအုံးသို့ ။)
(၁၆) ဆိတ်တို့ အစွမ်းထက်၊
ကျားသစ်နဲ့ဆိတ်၊ တွေ့ လေလေတိုင်း။
( မတရားတဲ့ မင်း၊ တိုင်းပြည်ညှင်းသော်
အမျိုးယုတ်သူ၊ ရာထူး ယူအံ့၊
သြဇာလွှမ်း မိုး၊ ဒါးမိုးနိုင်ကျင့်
လူယက် ခိုးဆိုး၊ တရားစည်ကျိုးသော်။
ရဟန်းရှင်လူ၊ ကြောက်ရွံ့ပူကာ
ဝေးလေရာသို့ ၊ ရှောင်လတ္တံ)
မသဒ္ဓါ ငယ်ဘ၀။ အဖိုးပြောပြတဲ့ပုံ။
မယုံ့ တယုံ၊ ယုံ့တယုံ
ဇာတိမာန် ရစ်တဲ့ မသဒ္ဓါ။
လူ့ ဘ၀ခေါက်ချိုး၊ သက်တမ်းထဲ
ဒို့ တိုင်းပြည်ကို ဖျက်နေသည်။
အဖိုးတန်၊ ရွှေခွက်ကို..
ကျီးမဲ ယုတ်တွေ လက်ထက်.
သမီးတော် မဆက်နိုင်တာမို့ 
ဗူးတောင်းနစ်လို့ ၊ ကျောက်ဖြာပေါ်
အရေးတော် မလှတဲ့ ဘ၀.
ခြုံကြားထဲ ပုန်းနေရတဲ့ ကျားသစ်မ။
မဲဇာမှာဘဲ.. ကျမ အနေကြာခဲ့ပြီ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:10 AM2comments
Labels: Joke, poem, Politics Poster
သင် ၏အပါး။ စောင့်ရှောက် သွားရန်
ဘိုးတော် သကြား။ မိန့် တော်ထားသည့်
ထီးချက် စောင့်နတ်၊ မနေအပ်၍
ပြောကြားသမှု။ ကျွန်ပ် ပြုမည်။
ဆုံးမ နာယူ။ လိုက်နာ ယူက
သင်၏ အသက်။ ချမ်းသာ ဖြစ်စေ
ငါသည် စောင့်လျှောက် ပြုပေအံ့။
ဆုံးမ နာယူ။ မလိုက်နာမူ
စိတ်ထားမကောင်း၊ သင့် ဦးခေါင်းသည်။
ရှစ်စိတ်အမွှာ ကွဲကြေ စေသား။
ငါ၏ သစ္စာ။ ကျိမ်စာသို့ ထက်။
မင်းယုတ် ဆိုစေ၊ ဇီဝိန် ကြွေလော့။
“ဓမ္မေန မဟာဇနံ ရဉ္ဇေတီတိ ရာဇာ”
တိုင်းသူပြည်သား၊ သတ္တ၀ါ များ၏
စိတ်နှလုံးကို၊ တရား မျှတ၊
ပျော်ရွှင် ရအောင် ၊ ပေးဆောင် သူသာ။
မင်းရာဇာ ဟု ခေါ်တွင်ပြုသည်။
ဂုဏ်ရည်နှင့် ဒြဗ်၊ သီရိကျက်သရေ
တရား မရှိ၊ သစ္စာ မရှိ၊
မမှန် စကား ၊ လိမ်လည်ခြင်းအား၊
ခံစားကာမဂုဏ် ။ အပျော်ဟုန်၍.
တိုင်းရေးပြည်မှု၊ လျှစ်လျှူရှု ခြင်း
ကောင်းမြတ်မင်းတို့ ၊ ကြဉ်ရှောင်အပ်၊
မင်းကောင်းမည်က။ (၄) ပါး သင်္ဂဟတရား မျှစေ။ ကျင့်ကြံပေလော့.
သဿမေဓ။ သင့်တင့် မျှစေ
ဆယ်ဖို့တဖို့၊ အခွန်သို့ သာ
ပုရိသမေဓ။ ရဲမက် စစ်သည်
မှုထမ်းသည်အား။ ရိက္ခာ လစာ
ဖူလုံ စွာလျှင်၊ ပေးကမ်း ကြည့်ရှု
သမ္မာပါသ။ ကုန်သည် ပွဲစား
လယ်သမားတို့ ။ လွတ်လပ် ကုန်စည်
မတည် အရင်း၊ ချေးဌားခြင်း။
ပီယ ၀ါစာ။ ချစ်ဖွယ်ရာသို့ ၊
ချေငံစွာဖြင့်၊ ဆက်ဆံ ပြောစေ
စည်ပင် ပြည်ရွာ သာစေကြောင်း.။
ရှစ်ပါးအစုံ၊ ရာဇဂုဏ် သည်။
သိကြားမင်းသို့ကျင့်။ ချီးမြှင့် ကောင်းသူ။
ဆိုးသူ အပြစ်။ စီရင် ချင့်လော့။
တန်ရာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်နှင့်။
အဖို့ ရစေ။ ဖြေးညှင်း သာယူ
လေကဲ့သို့ကျင့်စဉ်။ ပြည်သူ ရင်၌
ဖြစ်တည် သမှု။ ထောက်လှန်း ရှာဖွေ
တသား ထဲနေ။ ချင့်စာနာစေ။
ယမမင်းကဲ့သို့။ ချစ်မုန်း မဆို
မျက်နှာ မလိုက်။ အမှန်ကြိုက်သူ။
လျှော်ညီ အမှု။ ပြစ်ဒဏ်ပြု။
သမုဒ္ဒရာမှန်က၊ ရေကို မတောင့်တ၊
မြစ်ကြီးငါးသွယ်၊ မြစ်ငယ် ငါးရာ
ချောင်းရေ မြောင်းရေ။ ဘယ်ရေမဆို
၀င်လာ သမျှ၊ လက်ခံရ၏၊
မင်းတို့ မည်သည်၊ ဥစ္စာလောဘ မတောင့်တနှင့်၊
လပြည့်ဝန်းနှယ် ။ ရွှင်လန်း ချိုမြ။
နာပျော် စကား။ ခပ်သိမ်း ဗိုလ်လူ
ချစ်ခင်သူတို့ ။ ၀မ်းမြောက် ဖို့ ရာ.
ဤမြေပံသု။ ပထ၀ီ ထုနှယ်
မှီခို ရာထား၊ သတ္တ၀ါများတို့ 
ပြည်တင့်တယ်စေ၊ သင်ကျင့် ပေရော့။
၀သန်မိုးရေ. စိုစွတ် စေသား.
ပေးကမ်းစွန့် ကြဲ၊ ဒါနမြဲစေ.
နာယကတရား ၊ ၆ ပါး ရှိ၏။
သင်ပြည့််စုံစေ။ မင်းမြတ် အဆွေ။
သတိ မလပ်၊ ဆင်ခြင်အပ်။
သံဝိဘာဂ.. ဝေဖန် ဆင်ခြင်၊
ပိုင်းခြား ထောက်ရှု၊ ခွဲခြား နိုင်မှု။
ရင်မှ ဖြစ်ငြား။ သားငယ်လားသို့ 
ဣက္ခနာ... ဥာဏ် ပညာရှိ
ထို က၀ိအား၊ ချဉ်းကပ် ဆည်းယူ ။
မရှူံးနိမ့်ကြောင်း။ နည်းလမ်း ကောင်းသည်အပရိဟာနိယတရား ၊ မင်းကျင့်စဉ်၏ (၇)ပါး
စည်းဝေး မပြတ်။ ဆုံးဖြတ် ညီညာ
ပြည့်ကောင်းမှု။ ဆွေးနွေး ပြုသည်
၂။ သမဂ္ဂ ၊ အများနဲ့ အမှု
၃။ ပညတ္တိပဋိပဇ္ဇန၊ ရှေးမင်း ပညတ်၊
ရာဇသတ်များ၊ စည်းမျဉ်း ဥပဒေ ၊
၄။ သုဝစ၊ လူကြီး သူမ၊ ရိုသေကြ
၅။ အပသယှ၊ အားအင်နည်းသူ
မိန်းမသူများ ၊ မစော်ကားရ။
အနိုင်အထက် မသိမ်းယူရ။ မနှိပ်ကွပ်ရ။
၆။ လူမျိုးဆိုင်ရာ၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊
၇။ ဂုတ္တိ၊ ပြည်တွင်းသံဃာ၊
ရိုသေ စွာဖြင့်၊ ဖိတ်ခေါ်စောင့်ရှောက်၊
ပြည်သူ မြတ်နိုး။ မင်းမျိုးကောင်းသည်။
“မင်းကျင့်တရား၊ (၁၀) ပါး”၏ ဂုဏ်ကုံလုံပြည့်စေ။ စောင့်ရှောက်ပေ၏။
(၁) စွန့် ကြဲ ပေးကမ်း၊ လှူဒါန်း ကြည်ဖြူ။
အလှူ ဒါန။ ပြုအမျှဖြင့်၊
(၂) ငါးပါး သီလ၊ ဆောက်တည်ရ၏။
သူ့ သက်မသတ်။ မမူးရစ်တတ်၊
(၃) ပရိစ္စာဂ- စွန့် ကျဲပေးကမ်း
မင်းမှုထမ်းတို့ ၊ မပင်ပန်းစေ၊
(၄) သမ္မာပဋိပန္န (အဇ္ဇ၀) - ဖြောင့်မတ်ရမည်။
(၅) မုဒုက (မဒ္ဒ၀) နူးညံ့ပျော့ပြောင်း၊
(၆) ဥပေါသထ (တပ)- ကောင်းသောအကျင့်
(၇) အက္ကောဓ ရန်ငြိုးအမျက်၊
စိတ်မကွက်နှင့်၊ မိခင် စိတ်ထား
ရင်ဝယ်သားသို့ ၊ စောင့်ရှောက်ဖို့ ၊
(၈) အ၀ိဟိံသန- တိုင်းသူပြည်သား
သတ္တ၀ါများကို ၊ နှိပ်စက်ညဉ်းဆဲ။
(၉) ခန္တီ သည်းခံ၊ ဒေါသမာန်ကို။
(၁၀) အ၀ိရောဓ- ရဟန်း၊ ရှင်၊ လူ၊
ပြည်သူ မှူးမတ်၊ မဆန့်ကျင်အပ်၊
ဤ ဆယ်ခုသည်၊ မင်းမြတ်တို့ ၏ ကျင့်ဝတ်ပေ။
ဤစကားသည်။ ဗုဒ္ဓမြွက်ကြား“ရာဇောဝါဒ သုတ္တန် ” လာ
သင်မှတ်ရာသို့ ။ ဆင်ခြင်ဖို့ ။
ငါ၏အလို ။ မပြုလိုက
ယခု (ပစ္စုပ္ပါန်)၌၊ ချက်ချင်း အကျိုး
(မတည်မမြဲခြင်း၊ ဆင်းရဲခြင်း၊နှင့် အမြဲမရှိခြင်း)တရားသွင်းလော့။
မသဒ္ဓါ ( ၁။ ၅။၂၀၀၈) ..
မှတ်ချက်. ကိုးကား.ယောမင်းကြီး ဦးဖိုးလှိုင်ရေးသားတဲ့ “ရာဇဓမ္မသင်္ဂဟကျမ်း”
မေဒါဝီ ၏ ရာဇဓမ္မ သင်္ဂဟ http://maydar-wii.blogspot.com/2007/08/blog-post_27.html
ဟစ်တိုင် လူမင်းနှင့်ကျေးမင်းပြဇာတ် http://www.hittaing.org/feature/2006/lumin.html
( ဒီဃနိကာယ ၂ ၊ ၃ ၊ မဟာပရိနိဗ္ဗာနသုတ္တ )
ရွက်ဝါ၏ ဗုဒ္ဓနှင့် ဒေ၀ဒတ် တို့၏ နိုင်ငံရေး သဘောထားများ ttp://ywetwar.blogspot.com/2007/10/blog-post_22.html
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 11:55 PM 1 comments
ရွှေမင်းသမီး နဲ့မိစ္ဆာ သရဲအိုကြီး။
သူမ ရဲ့ လှပတဲ့မျက်နှာကလေး.
သူ့ ရဲ့ မဲ့ခွက်ခွက်နဲ့ မျက်နှာကြီး
တွေ့ တာနဲ့ ကြက်ဥပုပ်နဲ့ ပေါက်ချင်လှ။
သူမ ရဲ့ အပြုံး
လူသား အားလုံးရဲ့ စိတ်ကို ရွှင်ပြုံးစေ။
သူ့ ရဲ့ အပြုံးက ကျက်သရေ မဲ့
ဖနောင့် နဲ့ သာ ပေါက်ချင်စရာ။
သူမ ရဲ့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်
တိုင်းပြည်အတွက် အသက်စွန့် ခဲ့တာ။
သူ့ရဲ့ ဘိုးစဉ်ဘောင်ဆက်က၊ သတ္တိအပြင်မထွက်
သူမ ရဲ့ နံမည်ကကျော်ကြား
ကမ္ဘာတလွှားမှာ ပန်းလေညှင်းလို တင်ပေါ်။
သူ့ ရဲ့ နံမည်ဆိုး.ပြောမိ ခဲ့ရင်.
ဖရုသ၀ါစာ နဲ့ ဆဲခံရဖို့ သာပြင်။
သူမကို ဂုဏ်ပြု.ဒေါက်တာဘွဲ့ ပေးကြ
သူ့ ရဲ့ ငယ် ကိုရင်ဘွဲ့ တစ်ခုတောင်
ဘဘုန်းကြီး က ပြန်သိမ်းသွားပြီ။
သူ ဟာအာဏာရူး လူမိ်ုက်
နံမည်ဟာ ခွေးရေ ပုရပိုက်ထဲမှာ။
ဆု တံဆိပ်တော်တွေ၊ အမျိုးမျိုးချီးမြှင့် ခံနေရ။
သူ ဟာ မိန်းမရဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီတွေ ကြား
ပြေးပေါက်မှား၊ အသက်ရှုမှား၊ ဗျာများနေတဲ့သူ။
သူမ ရဲ့ ဇာတ်လမ်း.အောင်မြင်မှူအထွဋ္ဋ်အထိတ်နဲ့ 
သူ့ ရဲ့ နိဂုံး သူသတ်ကုန်းမှာ စီရင်ချက်ချ၊
သူမ ရဲ့ သားစဉ် မြေးဆက်။
သူ့ အတွက်ဟာ.မမေ့ မပျောက် ဂုဏ်ယူနိုင်ကြစေ။
သူ့ ရဲ့ လူယုတ် မျိူးနွယ်
သူသေတာနဲ့မျိုးပြုတ်ကြတော့မှာ။
အာဇာနည်မျိုးရိုး၊ သံမဏိ လေဒီ
သူ ဟာ လူကြီးမင်း
ဘယ်သူက အနိုင်နဲ့ ပိုင်း
ဘယ်သူက စားရမယ်..အရှုံးရဲ့ ကြက်ချေးတုံး။
တံကျင်သျှိုသတ်မဲ့ လူထု အပြစ်ပေးပွဲ။
မင်း ဖင်ကွဲပြီး သေတော့မှာမလွဲ။
ပြီးမှ…မပြောမရှိ နဲ့ ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 2:59 AM 1 comments
လွတ်လပ်သယောင်ယောင် နဲ့ ဒို့ မလွတ်လပ်
အင်္ဂလိပ်ကျွန်မှ လွတ်ခဲ့ သော်ငြား..
ဆက်တိုက်ကြမည်.... ဒို့ တက်လူ။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 9:55 PM 1 comments
Labels: poem, Politics, Politics Poster
အမလေးဟဲ့ ..တယ်တော်ပါ့ ..ဒို့ များနအဖ။
ညအချိန် ကြယ်နဲ့ လအဆင်း
နတ်ဒေ၀တာ ရဲ့ တန်ခိုးပြာဋ္ဋိကာစွမ်းအား။
တိရိစ္ဆာန် စွမ်းအင်သုံး ဆီကျိတ်ခြင်း။
လေ၏ စွမ်းအင်။ ဒလက်ဆင်။
စွမ်းအင်ထောက်ပန့်အသုံးဝင်။
ထင်းမီးသွေး နဲ့ ကျောက်မီးသွေး။
မီးကို မွှေး..ရေနွေးအိုး တည်။
ရေနွေးငွေ့ အင်ဂျင်.စက်၏ စွမ်းအင်။
အက်ဒီဆင် တီထွင်တဲ့ မီင်္းသီး။
ဘင့်ဂျမင် ဖရန်ကလင်း ထီထွင်တဲ့ ဘက်ထရီ။
ပြောင်းလဲ တိုးတက် နည်းပညာလှိုင်း
လူ့ သမိုင်း၏ မှတ်တိုင်
သိပ္ပံပညာရဲ့ တိုးတက်ခြင်း ။
ရေနွေးငွေ စွမ်းအား၊ အင်ဂျင်များကိုလည်စေ။
E=MC2အိုင်းစတိုင်း ရဲ့ သီအိုရီ။
RADIOACTIVE DECAY, FUSION နဲ့ FISSION
အမှောင်ကို ခွင်း ၊ ရွန်းလက်ဝင်း
လူ့ ဦးဏှောက်ရဲ့ အားသာခြင်း၊
၂ပေမီးချောင်း ကလေး အလင်းရအောင်
ရွှေဥာဏ်တော်စူး ကြောင်တောင်တောင်
မြန်မာ အင်ဂျင်နီယာများ နားမှာ ကြား..
ရုရှားရောက် နျူကလီယာပညာသင်၊ စစ်ဗိုလ်ငယ်များ
ရှိတဲ့သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့ကို ရောင်းစား
ကျွဲ နွားသုံးကာ.မီး ထွန်းစေမယ် တဲ့။
နအဖ အစိုးရ..သူတို့ ရဲ့ COPY RIGHTS ကိုဝယ်.
ညအခါမှာ မီးလေးလင်းဖို့ အရေး
တပြည်လုံး အိမ်တိုင်း နွားမွေးရဘွယ်။
အိမ်တောင်ဦးစီးယောက်ျားများ၊ နွားစာ မြက်ရှာ ရွာလည်
မသဒ္ဓါ (၁။၂။၂၀၀၈) နစ်နေမန်း ၏ post ကိုဖတ်ယူ ခံစားထားပါသည်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 5:13 AM0comments
မင်းမဲ့ တိုင်းပြည် မဖြစ်ချင်ပေမဲ့
ဒို့ တတွေအားလုံး ရေနည်းငါးတွေ။
မငိုတဲ့ ခလေး နို့ မ၀နိုင်ဘူး။
ဘယ်က ပါးကွက်သားကြံ့ဖွတ် ကလေကချေ။
ဒီမြေ.. ဒီလေ..ဒီရေ မှာ..
ဒို့ တတွေ အတူနေထိုင်ခဲ့
ဒို့ အားလုံး တိုင်းရင်းသားတွေ။
ဗမာမို့ဒို့ တတွေ တမူးပိုမရှူပါဘု
ပင်လုံမြေက စာချုပ်၊ ဆက်လက်ခိုင်မြဲစေ။
ရွှေရည်စိမ်အတု။ လွတ်လပ်ရေးကင်းမဲ့နေမှု
အားလုံးသတိချပ်။ တွဲလက်ဆက် ခိုင်မာမြဲစေ။
ကိုယ့်စွမ်း ကိုယ်ယုံ။ သစ္စာပုံစေ။
အမြစ်မချန်။ ဒို့ စုပေါင်းတော်လှန်။
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 4:11 AM0comments
မျှော်လင့်ချက်များနဲ့၂၀၀၈။ တဖန်ပြန်မွေးဖွားမဲ့ မြန်မာပြည်သစ်
၂၀၀၇ ရဲ့ ရက်ကလေးတွေ..
ဇာမဏီဌက်မွှေးကလေးများသို့ 
ငိုကြွေးရင်ကွဲ ပက်လက်နဲ့..အမိမြန်မာပြည်။
အသားထည်းက ထွက်နေတဲ့ လောက်။
အာဏာအတွက်၊ တဏှာ အတွက်၊
ဒို့ တွေခံစားတာ များခဲ့ပြီ။
ဒင်းတို့ လက်ထက်ကျမှ သာသနာ လာပျက်ရမလား.
စဉ်းစားကြ ..ကိုယ့်လူတို့ 
အမိမြေရဲ့ ငြိမ်းချမ်း လွတ်လပ်ရေးသို့ 
ဒို့ မျိုးဆက်တွေ တာဝန်ရှိတယ်။
ရဲဘော် သွေးသောက် အသက်ရင်း
နောက် ရာစုဆီသို့ ..
အလင်းထဲသို့ပန်းတွေ ပွင့်စေမလား။
တနှစ်တနှစ်၊ ကျွန် သက်ရှည်ခဲ့
တော်လှန်ရမဲ့ အချိန်၊ ခုရောက်ပြီ။
ဇာတိ မာန်ချီ ပါဝင်စို့ ။
လင်းလက်စေမဲ့ ၂၀၀၈ သို့ ။
မသဒ္ဓါ ( ၁။၁။၂၀၀၈)
Posted by Thadar (မသဒ္ဓါ ) at 12:54 AM0comments
မေတ္တာတရားနဲ့ သာသနာ့စစ်သည်။ ငြိမ်းချမ်းလမ်းလျှောက် ...
မဟောင်းနိုင်တဲ့ အိပ်ရာဝင်ပုံပြင် (သို့ ) ကောသလမင်း...
မျှော်လင့်ချက်များနဲ့၂၀၀၈။ တဖန်ပြန်မွေးဖွားမဲ့ြ...